Vondron'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fampiasana manokana | Sina Natambatra tamin'ny fampiasana manokana Factory
Generator karazan-tsarimihetsika finday1. Natao manokana ho an'ny fitakiana herinaratra amin'ny finday mahazatra na eny an-tsaha.2. Ny akorandriaka dia vita amin'ny takelaka galvanisaly avo lenta na lovia miondrika, miaraka amin'ny fiasa manohitra ny harafesina, ary famehezana tsara, sns .3. Ny varavarankely sy ny varavarana amin'ny lafiny efatra dia manana fanohanana hydraulic mandeha ho azy, mora sokafana.4. Ireo kodiarana chassis dia azo noforonina ho kodiarana roa, efatra, enina arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Izy io dia noforonina ho bra vita tanana, mandeha ho azy, ...
Generator diesel maotera
Generator karazan-kaontenera Walter 1. Mampiasà kaontenera 20'ft ho an'ny genset hatramin'ny 1250kVA sy kaontenera 40'ft ho an'ny genset hatramin'ny 1250kVA. 2. Ny genset feno containerized dia azo alefa mivantana ho an'ny fitaterana an-dranomasina izay mitahiry ny vidin'ny entana. 3. Ny fonosana vita amin'ny landihazo sy lovia metaly perforated dia apetraka amin'ny manodidina ny canopy, miaraka amin'ny mpamono afo ihany koa. 4. Fampandrenesana indostrialy ivelany, vokarin'ny compact sy silencer. 5. Kabinetra napetraka amin'ny rafitry ny famatsiana, ny efitrano fanaraha-maso, ny rafitra jiro, ...
Generator Diesel Generator mangina
Generator karazana Walter mangina 1. Mampiasà kaontenera 20'ft ho an'ny genset hatramin'ny 1250kVA sy kaontenera 40'ft ho an'ny genset hatramin'ny 1250kVA. 2. Ny genset feno containerized dia azo alefa mivantana ho an'ny fitaterana an-dranomasina izay mitahiry ny vidin'ny entana. 3. Ny fonosana vita amin'ny landihazo sy lovia metaly perforated dia apetraka amin'ny manodidina ny canopy, miaraka amin'ny mpamono afo ihany koa. 4. Fampandrenesana indostrialy ivelany, vokarin'ny compact sy silencer. 5. Kabinetra napetraka rafitra famatsiana, efitrano fanaraha-maso, rafitra fanazavana, co ...